Kutakura uye Kuwanika | Karman® Mawiricheya
Zvinowanikwa Modern kutakura
Tiri munguva yemazuva ano umo zvese zvinogona kuve nyore nyore Zvinowanikwa, iyo inosanganisirawo kuwana kukwira. Kukwira kwakatosiyana zvakanyanya ne wiricheya mushandisi ipapo munhu asingashandisi a wiricheya. Pakave nemakambani mazhinji anongopa kukwira kune vanhu uye mamwe ezita rakakura pezvitsiga inogona kupa rubatsiro kune avo vari wiricheya kugadzira Zvinowanikwa. Pane sarudzo mbiri kana zvasvika pakusarudza yakakodzera iwe. Dzimwe sarudzo ndiUber, Lyft, Yellow Cab Co, mabhizinesi emuno, uye zvimwe zvakawanda. Isu tichaenda pamusoro pedzimwe zvishoma zvakadzama zveimwe sarudzo yatadoma pamusoro kuti ikubatsire iwe kuita sarudzo ine ruzivo. Iyi imwe nzira kana iwe usina kukwirwa nenhengo yemhuri kana shamwari uye muvakidzani wako haakwanise kukukwidzawo.
ber ine zvakasiyana mhando dzemotokari dzaunogona kukumbira kuti utore nadzo. Nezvo zvataurwa, unogona zvakare kukumbira wiricheya mota ine hushamwari yekukufambisa. Ivo vari kuyedza mamodheru emota ane akanyatsogadzirwa ramp nokuti vanoshandisa wiricheya uye zvakare mamwe malifts. Inonzi UberWAV uye parizvino iri muToronto, Austin, neLondon kusvikira vatanga kuendesa iwo mhando dzemotokari. Uber inoongororwa nguva dzese uye zvakare kuyedzwa nguva nenguva nekuti vane Audio ziso chitupa. Iyo kambani inozivisawo vatyairi nezve kutakura vanhu nemhuka dzekushandira uye ivo vanowana ruzivo maererano neizvi mwedzi mitatu yega yega kuti vagare vachiziva zvakanaka. Hazvigumiri ipapo, ivo zvakare vanopa rubatsiro kune avo vari mapofu kana vane mashoma-ekuona. Iyo Uber app inoenderana Voiceover IOS, Android Talkback, uye isina waya braille kuratidza izvo zvinoita kuti zvive nyore kune mumwe munhu kusvika kunongedza a kunongedza b ne kusunda yebhatani.
Ridhi rinenge rakafanana neUber asi rine misiyano yaro. Zve wheelchair factor, paunoshandisa Lyft unofanirwa kuronga kutasva maawa makumi maviri nemasere nemota yavo Zvinowanikwa kutumira basa rinowanikwa muapp yavo. Paunenge uchiwana iyo app ivo vachadaro zvinopa iwe nerunyorwa rwePatratransit taxi services dzavari kushanda nadzo kuti ugone kuwana mota dzine pekugara. ichi chinongedzo chinokuratidza rumwe ruzivo rwunonyora nzvimbo dzinopihwa mukati uye nezvaungaite kuti ugamuchire irwo rubatsiro rwaunoda.
Aya makambani maviri mahombe mumutambo handiwo chete ane kugona kuita izvi. Unogona Google yemuno kutakura services zvakare, izvo dzimwe nguva zvichave nyore kwauri nekuti ndeyako. Google yakawanda uye enzanisa iyo mitengo uye uone kuti ndeipi inokutorera iwe bhagi riine ruzivo rwakanyanya. Tarisa yako pepanhau remuno zvinyorwa pamwe chete neyako enzvimbo yeyero mapeji ezvinyorwa. Ruzivo rwakawanda rwaunoziva rwunokubatsira iwe kuti uwane yakanakisa sarudzo yako kana yemunhu mune yako upenyu izvo zvinoda icho.